Ujeeddada Barnaamijka: Abuuri bulshooyin noolaan ah iyo ballaarinta fursado dhammaanba si ay u sii nastaan iyada oo kordhinaysa horumarinta magaalooyinka waaweyn ee wanaajinta iyo waarta.
Guusha Minnesota waxay kuxirantahay gobolka 21aad ee tartanka tartanka. Waxaan nasiib u heysanaa in dhaqaale xooggan oo gobolka ah uu xoogga saaro ganacsiyada caalamiga ah, jaamacadaha, hay'adaha dhaqanka, iyo dadka sii kordhaya oo aad u firfircoon oo kala duwan. Waxaan sidoo kale la kulannay dhibaatooyin adag oo muddo dheer ah si loo hubiyo in dhamaan dadka degan degenaashu ay ka qayb qaataan barwaaqada gobolka. Waxaan horjoogsaneynaa murugo siyaasadeed oo aan horay loo arag iyo isku dheelitirn dhaqaale.
Hadafka Barnaamijka Gobollada & Bulshadu waa in la hormariyo dhaqaalaha guud iyo in la xoojiyo horumarka magaalooyinka waaweyn ee xooggan. Waxaan diirada saarnaa xoojinta nidaamyada si loo siiyo fursado ballaaran oo loogu talagalay shakhsiyaadka iyo qoysaska si ay u noqdaan kuwo dhaqaale ahaan isku filan, iyo in ay xaafadaha ka dhigaan kuwo firfircoon oo gobolka ku sii waaraya. Isbedelada nidaamyada waxay u shaqeeyaan ugu wanaagsan marka ay saameyn ku yeeshaan xoogagga suuqyada waxayna ka faa'iidaystaan hal-abuurka, hal-abuurnimada, iyo tamarta heerarka deegaanka, oo ku xiran dareen meel. Adoo xiraya dadka, meel, iyo suurtogalnimada, waxaynu ka shaqeynaa sidii aan u abuuri laheyn bulshooyin nool oo nooleynna fursado u fidin dhamaanba si aan u horumarino.
Warfaafinta, Fikradaha, iyo Khayraadka
Agaasimaha Barnaamijka Gobolka & Jaaliyadaha Lee Sheehy oo ka fariisanaya McKnight